किन खर्च भएन पुनर्निर्माणमा दाताको ४० अर्ब ? – Everest Dainik – News from Nepal
किन खर्च भएन पुनर्निर्माणमा दाताको ४० अर्ब ?
काठमाडौं, साउन ७ । दातृ निकायले पुनर्निर्माणमा खर्च गर्ने भनी गरेको प्रतिबद्धताअनुरूप ४० अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छैन ।
किन भएन खर्च
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका अनुसार विश्व बैंकले १२ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँमध्ये विभिन्न जिल्लामा ६ अर्ब १४ करोड खर्च भएको छ भने ४ अर्ब २९ करोड खर्च हुन सकेन । जाइकाले ६ अर्ब खर्च गर्ने भनेकोमा २ अर्ब ९३ करोड मात्र खर्च गर्यो भने बाँकी २ अर्ब ६ करोड फ्रिज भएको छ,अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।